Mi Pad 5၊ Poco F3၊ Redmi 9A နှင့် Mi Air Purifier တို့တွင် ဤ Xioami စျေးလျှော့စျေးများကို အခွင့်ကောင်းယူပါ | Androidsis
Mi Pad 5၊ Poco F3၊ Redmi 9A နှင့် Mi Air Purifier များတွင် အဆိုပါ Xioami စျေးလျှော့မှုများကို အခွင့်ကောင်းယူပါ
DaniPlay | 25/11/2021 09:30 | မိုဘိုင်း, Android တက်ဘလက်များ
ကွဲပြားသော အဆိုပြုချက်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ရက်အနည်းငယ်သည် Black Friday အတွက် ရရှိနိုင်သော ကမ်းလှမ်းချက်အချို့ရှိပါသည်။ စားသုံးသူများအတွက် သည်းမခံနိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်သည် အခြားထုတ်ကုန်များကြားတွင် ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ကို ပေးလိုသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ထဲတွင် AliExpress ၏ ရက်သတ္တပတ်များ၏ ထူးခြားသော ကိရိယာများ ပါဝင်သည်။ Xiaomi Mi Pad 5၊ Poco F3၊ Redmi 9A နှင့် Xiaomi Mi Air Purifier တို့သည် ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့အထိ. ယင်းတို့အနက် ပထမသည် အရေးကြီးသော ထုတ်လုပ်သူ တက်ဘလက်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမှာ အလယ်အလတ်တန်းစား ဖုန်းဖြစ်ပြီး တတိယမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖုန်းဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှင့် နောက်ဆုံးမှာ လေသန့်စင်စက်ဖြစ်သည်။
1 Mi Pad 5
2 နည်းနည်း F3
3 Redmi 9A
4 ကျွန်ုပ်၏ လေသန့်စင်စက်
စပိန်တွင် ၎င်း၏ပထမပတ်တွင် ၎င်းသည် ကြီးမားသောရောင်းချမှုခွဲတမ်းကို ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ 20% အထိ ဆိုက်ရောက်ပြီး သိသာထင်ရှားသော ရာခိုင်နှုန်း။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းရှိပြီး တက်ဘလက်ကို တပ်ဆင်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကြောင့် အရေးကြီးသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ Specifications များထဲတွင်၊ Xiaomi Mi Pad5သည် 11 x 2560 အစက်များနှင့်အတူ 1600-လက်မမျက်နှာပြင်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ (WQHD+) နှင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း 120 Hz။ ၎င်းတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်အချိုး 1500:1 ရှိပြီး ရှုထောင့်အချိုးမှာ 16:10 ဖြစ်ပြီး Dolby Vision အကြောင်းအရာနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု ပေါင်းထည့်ထားသည်။
ထွက်ရပ် 860-core Snapdragon 8 ချစ်ပ်ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ (7 nm ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်)၊ RAM6GB၊ 128/256 GB သိုလှောင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Adreno 640 GPU တို့ ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီက 8.720 mAh ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး 33W ဖြင့် USB-C မှတစ်ဆင့် အမြန်အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 8 megapixel ရှေ့ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ လူများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များ ပြုလုပ်လိုပါက ထင်ရှားစေရန် အရေးကြီးပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဏ္ဍအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။ အနောက်ကင်မရာက 13 megapixels၊ ရှေ့ဘက်ထက် အရည်အသွေးပိုကောင်းပြီး 4K ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။ အင်တာဖေ့စ်သည် Android 12.5 ကိုအခြေခံထားသည့် MIUI 11 ဖြစ်သည်။
5/6 GB ၏ Xiaomi Mi Pad 128 သည် စျေးနှုန်း 308,99 ယူရိုရှိပြီး ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့အထိ ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် AEBF43 ကို အသုံးပြုထားသည်။ AliExpress ပေါ်မှာမော်ဒယ်က 6/256 GB ပါ။ ၁၅ ယူရိုကုန်ကျတယ်. ဤရက်စွဲပြီးနောက် စျေးနှုန်းများသည် ပထမဗားရှင်းအတွက် ယူရို 351,99 နှင့် ဒုတိယဗားရှင်းအတွက် ယူရို 395,99 အထိတက်သွားသည်။
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရှာဖွေခြင်းသည် ဤအချက်နှစ်ချက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်။ POCO F3 သည် ကတ်တလောက်တွင် အရေးကြီးသော မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူထံမှ၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ကတိပေးထားပြီး လိုအပ်သည့်ကဏ္ဍအားလုံးတွင် လုပ်ဆောင်သည်။
POCO F3 သည် ကြီးမားသော 6,67 လက်မ ဘောင်ဖြင့် စတင်သည်။ Full HD+ ရုပ်ထွက်ပါရှိသော AMOLED အမျိုးအစားသည် တုံ့ပြန်မှုအချိန် 120 Hz နှင့် ထိတွေ့နမူနာ 240 Hz တို့ကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။ လူသိများသော Gorilla Glass ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် စခရင်၏ခံနိုင်ရည်မှာ တိုးလာပါသည်။
El POCO ၏ F3 သည် Snapdragon 870 ပရိုဆက်ဆာ၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အားကောင်းသည်။ Qualcomm မှ Adreno 650 ဂရပ်ဖစ် ချစ်ပ်နှင့် 6/8 GB RAM တို့ ပါဝင်သည်။ သိုလှောင်မှုပမာဏသည် 128 သို့မဟုတ် 256 GB အကြားတွင်၊ ဤအချက်ကို တိုးမြှင့်လိုပါက တိုးချဲ့အပေါက်ပါရှိသည့် အသုံးအများဆုံးအလုပ်များအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
ထို့အပြင် POCO F3 တွင် 4.320W အမြန်အားသွင်းစနစ်ပါရှိသော 33 mAh ဘက်ထရီ ပါ၀င်ပြီး0မိနစ်အတွင်း 100 မှ 38 အား အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဘောက်စ်အတွင်း အားသွင်းကိရိယာဖြင့် အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းသည် MIUI 12 + POCO Launcher ဖြင့် ပွင့်လာပါသည်။ကုမ္ပဏီ၏ အပ်ဒိတ်ပရိုဂရမ်တွင် ပါလာသောကြောင့် မတူညီသော နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများသို့ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ကင်မရာလေးလုံးက အဓိက 48MP ဖြစ်ပါတယ်။
POCO F3 5G ဖုန်းကို ယူရို ၂၃၃.၄၉ နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ AliExpress ပေါ်မှာ 29/6 GB မော်ဒယ်အတွက် ကုဒ် BFZBANX128 ကို အသုံးပြု၍ 8/256 GB မော်ဒယ်၏ စျေးနှုန်းသည် ကုဒ် AEBF256,99 ကို အသုံးပြု၍ ယူရို 43 ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာနှိပ်ပါ. နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့ ဖြတ်သန်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စျေးနှုန်းများသည် ယူရို 262,49 နှင့် 299,99 သို့ အသီးသီး တိုးလာသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ မက်ဆေ့ချ်များ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်စရာများကို အသုံးပြုမှုဖြင့်ဖြစ်စေ နေ့စဉ်အသုံးအများဆုံးနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဖုန်းတစ်လုံးကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖုန်းဖြစ်ပါသည်။ Redmi 9A သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ အများသူငှာ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ သင့်တော်တဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ ဂိတ်တစ်ခုကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်။
Redmi 9A သည် 6,53 IPS LCD မျက်နှာပြင်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ HD + ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူ၊ မြင့်မားသောခြားနားမှုနှင့်အတူ၊ အမြဲတမ်းမြန်ဆန်သောထိထိအတွေ့ကိုအလားအလာရှိသည်။ 9A တွင် လက်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော MediaTek Helio G25 ပရိုဆက်ဆာကို ပေါင်းထည့်ထားသောကြောင့် GPU သည် IMG ၏ PowerVR GE8320 ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင်2GB RAM နှင့် 32 GB သိုလှောင်မှု ပါဝင်သည်။
ကင်မရာနှစ်လုံး ထည့်သွင်းထားပြီး ကျောဘက်တွင် 13 megapixels ရှိပြီး မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားတွင်မဆို ဓာတ်ပုံကောင်းများ ရိုက်ကူးလိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Redmi 9A ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ5megapixel ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လ်ဖီရိုက်ခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အတွက် အကောင်းဆုံး။ 9A ၏ဘက်ထရီသည် 5.000 mAh ဖြစ်ပြီး Standard Base Charge ဖြစ်သည်။
Redmi 9A သည် AliExpress ပရိုမိုးရှင်းသို့ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ကုဒ် BFZBANX70,59 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ယူရို9ကျပါတယ်။ ဒီ link ကို နာမည်ကြီး e-commerce ပေါ်တယ်ကနေ။ Redmi 9A ၏စျေးနှုန်းသည်နိုဝင်ဘာ 25 ဖြတ်ပြီးသည်နှင့် 79,57 ယူရိုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်9ယူရိုခန့်လျှော့စျေးရှိသည်။
လေသန့်စင်စက်များသည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရောင်းချမှုတွင် အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Xiaomi သည် Mi Air Purifier မော်ဒယ်နှင့်အတူ ၎င်းနှင့်အတူ ပါဝင်လာခဲ့သည်။စမတ်ကျသော ထိန်းချုပ်မှုပါရှိသော၊ အားလုံးသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ Google Assistant၊ Alexa နှင့် My App တို့နှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လေထုအရည်အသွေး အပ်ဒိတ်များကို ပြသသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် LED မျက်နှာပြင်ကို ပြသသည်။၎င်းသည် PM2.5 တန်ဖိုးများဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်ကို ပြသသည်။ အလင်းကွင်းအား အိမ်တွင်းလေထုအရည်အသွေးအတွက် အမြန်နှုန်းရည်ညွှန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် သင်ရှူရှိုက်သည့်လေအရည်အသွေးကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပုံဖော်ပေးပါသည်။ တစ်မိနစ်လျှင် သန့်စင်သောလေ ၅၃၃၀ လီတာခန့် ထုတ်ပေးသည်။
Mi Home အက်ပ်လီကေးရှင်း၊ Xiaomi Home + AI အသံဖြင့် စမတ်ထိန်းချုပ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ သင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့် လေထုအရည်အသွေးကို ခြေရာခံနိုင်သည်။ သင်၏ လေသန့်စင်စက်ကို အချိန်တိုင်း အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ပါ၊ အဖွင့်အပိတ်အချိန်များကို သတ်မှတ်ကာ Amazon ၏ Alexa အပါအဝင် အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ လွယ်ကူသော အသံဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Google Assistant နှင့် Alexa AI စမတ်စနစ် နှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Xiaomi Mi Air Purifier 3C သည် AliExpress ၏ နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့တွင် ပရိုမိုးရှင်းသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ကုဒ်နံပါတ် BFZBANX80,99 ကိုအသုံးပြု၍ စျေးနှုန်း9ယူရိုဖြစ်သည်။ ဒီ link ကို. Mi Air Purifier သည် ဤ portal ပရိုမိုးရှင်းများဖြတ်သန်းပြီးနောက် 89,09 ယူရိုခန့် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Mi Pad 5၊ Poco F3၊ Redmi 9A နှင့် Mi Air Purifier များတွင် အဆိုပါ Xioami စျေးလျှော့မှုများကို အခွင့်ကောင်းယူပါ
The Lord of the Rings သည် ဂိမ်းကစားသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး စိတ်ကူးယဉ် franchise ဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်း5ခု